Ny mpanjaka manetry tena - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2014-04 mpandimby ny Magazine > Ilay mpanjaka manetry tena
Tokony ho andrana sy hankafy toy ny sakafo tsara ny fianarana Baiboly. Azonao alaina sary an-tsaina ve hoe mankaleo ny fiainana raha tsy mihinana fotsiny isika mba ho velona sy mihinana ny sakafontsika fotsiny satria mila manampy zavatra mahavelona ny vatantsika? Tena adala tokoa raha tsy miadana kely isika hankafy ny hanim-py. Avelao hivoaka ny tsiron'ny kaikiny tsirairay ary avelao hiakatra ao anaty orona ny hanitra. Efa noresahiko teo aloha ny amin’ireo vatosoa sarobidy ahitana fahalalana sy fahendrena hita ao amin’ny andinin-teny ao amin’ny Baiboly. Amin’ny farany dia maneho ny maha-zava-dehibe sy ny fitiavan’Andriamanitra izy ireo. Mba hahitana ireo vatosoa ireo, dia tsy maintsy mianatra miadana sy mandevona andinin-tsoratra masina toy ny sakafo tsara isika. Ny teny tsirairay dia tokony ho ao anatiny sy tsakoina indray mba hitarika antsika amin'ny momba azy. Andro vitsivitsy lasa izay dia namaky ny andalana nosoratan’i Paoly aho izay nilazany ny amin’Andriamanitra manetry tena sy maka ny endriky ny olona (Filipiana). 2,6-8e). Haingana ve ianao afaka mamaky ireo andalana ireo nefa tsy takatrao tsara na tsy takatrao ny vokany.
Mijanona kely ary avelao hieritreritra izany. Ilay namorona izao rehetra izao, izay namorona ny masoandro, ny volana, ny kintana, ny tontolo iray manontolo, dia nanary ny tenany tamin'ny fahefany sy ny hatsarany ary lasa olombelona noforonin'ny nofo sy ra. Na izany aza dia tsy lasa olon-dehibe izy, fa zanaka tsy afa-manoatra, izay miankina amin'ny ray aman-dreniny. Nataony izany noho ny fitiavanao ahy sy ianao. Kristy Tompontsika, ilay lehibe indrindra amin'ny misiônera rehetra, dia nandatsaka ny hakanton'ny lanitra mba hijoro ho vavolombelona amintsika ny vaovao mahafaly eto an-tany amin'ny fananganana tanteraka ny drafitry ny famonjena sy ny fibebahana amin'ny alàlan'ny asa feno fitiavana azy. Ilay zanaka tian'ilay rainy dia nanisa ny harena any an-danitra ho tsy ampy lanja sy nanetry tena rehefa teraka fony izy zaza tao an-tanàna kely any Betlehema. Mieritreritra ve ianao fa nifidy lapa na ivon'ny sivilizasiôna ho an'ny nahaterahany, Andriamanitra? Tamin'izany fotoana izany i Betlehema dia tsy voaravaka lapa sy ny afovoan'izao tontolo izao sivilizasiona. Izy io dia ara-politika sy ara-tsosialy.
Faminaniana avy amin’i Mika 5,1 Hoy izy: “Ary ianao, ry Betlehema Efrata, izay kely amin’ny tanànan’i Joda, avy ao aminao no hihavian’ilay Tompon’ny Isiraely, izay niandohany hatramin’ny taloha sy hatramin’ny taloha indrindra.
Ny zanak 'Andriamanitra dia tsy nateraka tao amin'ny tanàna iray, fa na dia tao anaty trano firenana aza. Manam-pahaizana maro no mihevitra fa io trano io dia angamba trano kely ao aoriana izay feno fofona ary feon'ny omby natory. Tsy nanana endrika manandratra manokana àry Andriamanitra tamin'ny fotoana nisehoany teto an-tany. Ny feon'ny trompetra izay manambara mpanjaka dia nosoloina amin'ny fandatsahan-dra ny feo sy ny hiantsoana ny boriky.
Io mpanjaka manetry tena io dia nitombo ary tsy dia nalaza ary tsy nanome voninahitra azy, fa ilay rainy kosa. Tao anatin'ny faharoa ambin'ny folo ambin'ny folon'ny Filazantsaran'i Jaona no nilaza fa tonga ny fotoana hivavahana, ary dia nitaingina ampondra tany Jerosalema izy. I Jesosy dia nekena ho iza izy: ny mpanjakan'ny mpanjaka. Niparitaka ireo sampana rofia talohan'ny alàlany ary tanteraka ny faminaniana. Ho avy io H Hosna! Nihira izy ary tsy mitaingina soavaly fotsy misy haingam-pandeha, fa amin'ny ampondra izay tsy mbola mihombo. Nankany an-tanàna niaraka tamin'ny tongony izy, tao anaty vovoky ny zana-boriky tanora.
Ao amin’ny Filipiana 2,8 miresaka momba ny fanalam-baraka farany nataony:
"Nanala baraka ny tenany ary nanaiky ny fahafatesana, eny hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana". Resiny ny ota fa tsy ny Fanjakana Romanina. Jesosy dia tsy nahafeno ny antenaina nananan'ny Isiraelita ny amin'ny Mesia. Tsy tonga handresy ny Fanjakana Romanina izy, araka ny nantenain'ny maro, ary tsy tonga hanorina fanjakana eto an-tany ary hanandratra ny olony. Teraka tamin'ny zazakely izy tao amin'ny tanàna tsy mitombona ary niara-nipetraka tamin'ny marary sy mpanota. Nanalavitra ny tenany izy. Nitaingina ampondra tany Jerosalema izy. Na dia ny lanitra aza no seza fiandrianany ary ny tany no lelany, tsy niainga izy satria ny antony voalohany nampidirany anao dia ny fitiavany ahy sy ianao.
Izy no nanorina ny fanjakana naniry mafy hatramin’ny namoronana izao tontolo izao. Tsy resiny ny fitondran’ny Romana na ny fanjakana hafa rehetra eto amin’izao tontolo izao, fa ny fahotana izay nihazona ny olombelona ho babo nandritra ny fotoana ela. Manapaka ny fon’ny mino Izy. Nanao izany rehetra izany Andriamanitra ary nampianatra antsika rehetra lesona lehibe momba ny fitiavana tsy misy fitiavan-tena tamin’ny fanehoana ny tena toetrany amintsika. Rehefa avy nanetry tena i Jesosy dia “nanandratra Azy ka nanome Azy ny anarana ambony noho ny anarana rehetra” (Filipiana). 2,9).
Miandrandra ny fiverenany izahay, izay anefa, tsy hitranga ao amin'ny tanàna kely iray tsy misy fotona, fa ho hitan'ny olombelona rehetra amim-boninahitra, fahefana sy voninahitra. Amin'ity indray mitoraka ity dia mitaingina soavaly fotsy izy ary haka ny fahefana marina ananany amin'ny olona sy ny zavaboary rehetra.